HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 24-MAY-2020
Sunday May 24, 2020 - 11:45:14 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo Oo Ugu Hambalye eyay Dadka Soomaaliyeed Munaasabad da Ciidda Soonqaad Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Far maajo oo ugu hambalyeeyay dhammaan umm adda Sooma aliyeed munaasabad da barakaysan ee Ciidul Fidriga ayaa Alle ka b
Madaxweyne Farmaajo Oo Ugu Hambalye eyay Dadka Soomaaliyeed Munaasabad da Ciidda Soonqaad Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Far maajo oo ugu hambalyeeyay dhammaan umm adda Sooma aliyeed munaasabad da barakaysan ee Ciidul Fidriga ayaa Alle ka baryey inuu naga aqb alo soonkii iyo cibaadadii wanaag sanayd ee aynu gudannay intii la gu jiray bishii Barakaysnayd ee Ramadaan. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey shac abka Soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay u gu dulqaateen bandawgii lagu soo rogay dalka ee lagu ilaalinayey badqabka caafimaad ee da dkeenna, gaar ahaan Bisha Ramadaan oo ca adi ahaan uu kordho culeyska nololeed. "Waxaan idin xasuusinayaa in farxadda maalmahan barakaysan ee Ciidda aynu si ga ar ah ugu istaagno la shaqaynta laamaha caa fimaadka, si buuxdana ugu hoggaansanno tal ooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaa linayo bulshadeenna." Madaxweyne Farmaajo ayaa munaasabad da Ciiddan waxa uu si gaar ah ugu hambalyee yay Ciidamadeenna geesiyaasha ah ee har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dal ka, isaga oo ku bogaadiyey dadaalka muuqda ee ay ku dardar geliyeen amniga iyo nabadgel ya da intii lagu guda jiray bisha barakaysan. "Ciidamadeenna geesiyaasha ah waxa ay xaqiijiyeen in shacabka Soomaaliyeed ay 2d iyo xasillooni ku gutaan cibaadada iyo acmaa shii bishii barakeysnayd ee Ramadaan, guud ahaan dalka, gaar ahaan Caasimadda Muqdi sho oo sanaddo badan kaddib ay shacabkeen nu ku soomeen kuna afureen nabad." Mada xwenaha Jamhuuriyadda ayaa kula dardaa rmay dadka Soomaaliyeed in farxadda Ciidul Fidriga awgeed uu qof kasta gacan ka geysto farxad gelinta dadkeenna tabaaleysan, ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horre eyo, midnimada iyo wadajirka, kuwaas oo dha mmaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Isla amka.
DF oo ku dhowaaqday in Shalay ay tahay ciid kana laabatay go’aankii hore
DF oo ku dhowaaqday inay Shalay tahay ci id kana lab atay go’aankii hore W/Awqaafta iyo Arrima ha Diinta ayaa Habeen hore shaacis ay in Sabtida 23-ka May ay tahay maalinta 1aad ee Cii dul Fitri, ka dib markii la xaqii jiyey in bisha la ga arkay Soomaa liya wasiirka Awq aafta iyo Arirmaha Diinta Sh. Nuur Max amed Xuseen, oo ay wehliyaan culumo uu ka yimid Sh.Cali Wajiis, ayaa warbaahinta dowladda ka sheeg ay in deegaano badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya la ga arkay bisha.
Baxay sheegeen in ugu yaraan 8 qof la dha ariyey islamarkaana ay xaqiijiyeen inay bisha arkeen, ayaga oo jooga deegaano kala duwan.
Sidoo kale, R/wasaraaha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Soomaalida ugu hambaly ee yey ciidda, isaga oo muuqaal soo dhigay war baahinta dowladda.
Go’aanka dowladda ayaa yimid saacado ka dib markii ay shaacisay in bisha la waayey sid aas darteedna ay ciidda tahay Axad, hase yee shee waxaa kadib aad isu soo taray warka ah in bisha laga arkay meelo badan.
ku dhowaaqisay aragtida bisha ayaa waxaa ku horreeyey maamulka Jubaland iyo Al-Shabaab oo si kala gooni gooni ah u shaaciyey in bisha laga arkay deegaano badan, sidaas darteedna ay ciidu tahay Sabti.
Tacsi xanuun badan oo naxdin leh Waxaa Shalay Gothenburg Ku geeriyooday Sh. Cabdiraxmaan Sheekh Muxudiin Celi
Inaalilaahi wa inaa leyhi raajicuun Tacsi xan uun badan oo naxdin leh Waxaa Shalay Goth enburg Ku geeriyoo day Sheekh Cabdiraxmaan Sh. Muxudiin Celi
Waxaan allah uga baryeynaa in uu jannatul Firdowsa ka waraa bi yo ehelkiisana Samir iyo iimaan allaha kasii yo. Amiiin
Sheekha Waxaa uu ahaa sheekhyada ugu weyn Dal Sweden gaar ahaan Gothenburg oo uu ka faafin jiray diinta Islaamka iyo dha qanka fiican ee diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Haddaan nahay bahda Somaliweyn oo aan aad u soo wada shaqeynay sheikha aan leena hay Ilaahey hakuu naxariisto anagane ga daa shaa ilaah nama fidneeyo, Aamiin.
Sidoo kalena Maamulka iyo Howladeenada wargeyskan M.Times Dailynewspaper ayaa Tacsi taa la mid ah u dirayaan dhammaan qoy skii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday sheekha iyo culimada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaana leeyihiin alleha idinka samir siiyo Marxuumkana jannada alle haka waraabiyo Aamiin Aamiin Aamiin.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Ya asiin Faratoon ayaa shaaciyey inay jiraan dalal dhowr abnm<>?daneynaya in ay dib u furmaan wa da-had alada Som aliland iyo Soo maaliya.
Wasiir Faratoon ayaa she egay inay Somali land tah ay dal madax-banaan, isla markaana ay iska indho tire yso DFS oo ku sheegay mid uu haysto ‘jahwa reer siyaasadeeda’.
Wasiirka ayaa sidoo kale ka horyimid qorsha ha midnimada Soomaaliya ee ay wadaan R/ wasaaraha Itoobiya iyo Safiir ka Mareyka nka ee Soomaaliya, xili uu dhawa an soo ifbaxay dad aalada ay ku hirgelinayaan qorshahaasi.
Faratoon ayaa ka dhawaajiyay inaysan ma rnaba diyaar u aheyn Somaliland, wada-hada lo lagu rabo midnimo, balse ay diyaar u tahay wada-hadalo u horseeda ictiraafka ay mudada badan baadi-goobayeen.
Wasiirka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri "Wey jiraan Wadamo doonaya inaynu wada-hadalno Soomaaliya oo aynu iskugu nim aadno miiska wada hadalada, Waxaana xaqii qo ah in Maamulka Muqdisho oo jahaweerar si yaasadeed ku jira inay iska indho tirayaan xaqi iqooyinka jira”. "Waxaynu nahay Dal, Dawlad iyo Dad isku tashaday, mar walba rabitaankee na ayeynu ku soconaynaa, cid walbana inaynu qancino aye ynu diyaar u nahay, ee Qaramada Midoobay, M/Yurub, Midawga Afrika, Jaamaca da Carabta iyo Mareykankaba xiriir aad u fiican baa inaga dhexeeya ee waxaanu leenahay sid aas uu Ma daxweynahayagu sheegay ayaa dhab ah oo Soomaaliya waanu kala tagnay”. Wuxuuna intaas sii raaciyey "Waxaanu kala ha dli karnaa oo qudha in aanu sidaas hadda kala nahay aanu kala ahaano, oo waliba cid kasta na in aanu qaranimadayada ku qancino ayaa nu diyaar u nahay, ee ha naloo tixgeliyo mar kasta jiritaankayaga dawladnimo, dalnimo iyo dadnimo”.
Kulanka ay yeesheen guddiga heer Federaal ee ka hortaga xanuunka covid-19 oo qaab mu uqaal ah loo adeegsaday Mareegta Internet-ka ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray qiimeyn ku saabsan saameynta uu dalka ku yee shay xanuunka as.R/Wasaaraha XFS Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiy ay shirka jogtada ah ee Gudd iga heer Federaal ee xakam eynta COVID19 ka asoo looga hadlo arrimo dhowr ah.
Sidoo kale R/Wasaare Khayre ayaa Guddi ga ka hortagga faray dar dargelinta howlaha lo oga hortagayo faafitaanka dalka ee Cudurka Coronavirus iyo fatahaadaha ka jira meelo ka mid ah dalka Soomaaliya.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa la daree mayay in uu bilowday hoos u dhac ku imaana ya tirade dadka uu soo rito cudurka gaar aha an G/Banaadir waxaana wali jira dadaalo lagu xakameynaya halista uu leeyahay covid-19 iya doo guud ahaan dalka lasyka kaashanayo sidii dalka looga ciribtiri lahaa. Guud ahaan tirada uu soo ritay cudurkaan Karoona ayaa gaartay 1,594 halka 204 ay ka bogsoodeen markii lala tacaalay.
Gud/G/ Banaadir oo ka hadlay Hambalyada Ciida iyo go’aankii dowladda ee Ciida
Guddoomiyaha G/Banaadir ahna Duqa Mu qdisho Cumar Finish ayaa hambalyo ku aadan Ciidul Fitriga u diray Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan Shacabka G/Banaaadir, isagoo xu say in Shacabka ay nabad ku soomeen, nabad na ku afureen.
Guddoomiyaha ayaa she egay inkasta oo dadka Soom aaliyeed Shalay oo Sabti ah ay san aheyn Ciid, hase aha atee dad Soomaaliyeed oo ku nool gobolada dalka ay cadd eeyeen inay arkeen bisha Shaw aal, taasna ay keentay in Madax da dowladda Soomaaliya go’aan ku qaataan inay Shalay oo sabti ah tahay Ciid, si daasna dalka oo dhan looga ciiday.
"Qof lagu kalsoonaan karo ama in ka badan oo ay u dhaartaan inay arkeen bisha Soon a ma bisha Soonfur waxaa waajibeysa umadda muslimka inay soomaan ama ciidaan waa ogn ahay qeybo badan Caalamul Islaam inay go’aa nsadeen in Shalay tahay 30 bisha Ramadan, balse dadka Soomaaliyeed qaarkood ay xaqiiji yeen ayaa loo dhaariyay inay arkeen bisha Shawaal ayaa dowladda Soomaaliyeed go’aan ku qaateen, sidaas ku afureen shacabka, Soon kii aan soonay alle hanaga aqbalo Ciid wana agsan”ayuu yiri Guddoomiye Cumar Filish.
"G/G/Banaadir ahna Duqa M/Muqdisho Md. Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Finish) ay aa shacabka Muqdisho u diray hambalyo ku aaddan munaasabadda ciidul Fidriga,wuxuuna alle uga baryay dembi dhaaf”.
Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sh. Ax med ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliye ed inay iscaawiyaan inta lagu gudajiro maalm aha Ciida,maadaama Sanadkaan Xaalad adag ay dalka ka jirto.
Sheekh Shariif oo ha mbaly ada maalma ha Ciida u diray Shacab ka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale u soo jeediyay inay ka a qaataan talooyinka Caafimaadka si looga hortago inuu dalka ku faafo Cudurka COVID19
"Waxaan dhammaan umadda Soomaaliy eed usoo gudbinayaa hambalyada munaasab adda ciidul fitriga meel kasta oo ay joogtaan, Allaha naga wada aqbalo cibaadadii bisha bar akaysan ee Ramadan” ayaa yiri Shariif Sheekh Axmed.
Waxaa uu intaasi kusii daray "Farxadda cii dda sanadkan xaqiiqdii waa ka duwan tahay sanadihii hore oo waxay kusoo aaday xilli aad u adag oo cudurka COVID19 awgiis caalamkii oo dhan uu la dhibaateysan yahay, sidaa darte ed waxaan markale idiin soo jeedinayaa in la qaato tilmaamaha howlwadeennada caafima adka oo ah in la xaddido kulamada iyo xaflada ha la isugu imaanayo si looga hortago faafista cudurka”
Waxaa uu ku baaqay Ugu dambeyntii "Muna asabaddan waxaan uga faa’iideysanayaa in la xusuusnaado dadka masaakiinta ah, lana taa geero, kaalmana loo fidiyo In sha Allah”
Khaashuqi Gabadhi u doonneyd oo diiday cafis ay qoyska u fidiyeen dadkii dilay
Haweeneydi u doonneyd wariyihi Sacuudiga ee la dilay Jamaal Khaashuqji ayaa sheegtay "Iney cidna xaq u lahayn iney cafiso dilaaga”, ka dib marki uu wiil uu Kha ashuqji dhalay sheegay in ey dilaaga aabbahood ay cafiyeen.
Hatice Cengiz oo u dhal atay dalka Turkiga ayaa bar teeda Twiitarka ku qortay "Dilkii foosha xumaa ma jiro sharci looga qiil bixiyo”.
Khaashuqji oo si weyn u dhaleeceyn jiray dowladda Sacuudiga ayaa 2018-kii lagu dilay gudaha qunsuliyadda Istaanbuul uu Sacuudiga ku leeyahay. Saraakiisha Sacuudiga waxay sheegeen "dilka aan damiirka lahayn” iney dow laddooda wax shaqa ah ku laheen. Hase yee shee, hadal ka Sacuudiga waxaa su’aal geliy ey caalamka oo dhan.
Khaashuqji ayaa maqaallo ku qori jiray wargeyska Washington Post isaga oo geeridi isa ka hor ku noolaa dalka Mareykanka.
Mareykanka oo dhaliil kulul u jeediyey DF, baaq deg deg ahna u diray Farmaajo
Dowladda Mareykanka ayaa si kulul uga ha dashay khilaaf weli socda ee u dhaxeeya DFS iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedya da, kaa si oo ay ku qeexday mid aan la aqbali karin.
Sii-hayaha ku-xigeenka wakiilka Mareykan ka ee QM, Cherith Norman Chalet ayaa kula nkii Golaha Ammaanka ee arrimaha Soomaali ya ka sheegtay inay arrin walaac leh tahay in madaxda DFS iyo madax goboleedyada aysan muddo kulmin, si ay uga wada hadlaan xaalad da siyaasadeed iyo midda amni ee dalka.
"Waxaan ku boorineynaa madaxweyne Farmaajo inuu ku baaqo kulankii Golaha Amn iga Qaranka, sida uu qabo dastuurka, sida ugu dhaqsiyaha badan si looga wada-hadlo qor sheynta doorashooyinka, wada-shaqeynta am niga, iyo ahmiyadaha qaranka ee deg degga ah,” waxaa sidaas tiri danjire Chalet.
"Waxaan sidoo kale walaacsannahay in khe yraadkii amni ee loo baahnaa in lagula dagaa lamo Al-Shabaab si qaldan loogu adeegsana yo xifaaltan siyaasadeed oo ka socda gobollo qaar ah,” ayey tiri danjire Chalet.
Danjiraha ayaa dhanka kale sheegtay in DFS ay ku guul-darreysaneyso fulinta jadwalkii doorashooyinka qaranka.
"Waxaan soo dhoweeneynaa dadaallada ay Soomaaliya weli waddo ee ay ku qabaneyso doorashooyinka la qorsheeyey dhammaadka sanadkan, hase yeeshee waxaan ka walaacsa nahay inay ka dib dhaceyso jadwalka,” ayey tiri.
Mike Pompeo oo ay kusoo baxday fadeex ad la xiriirta Sacuudiga iyo Imaaraadka
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxaa kusoo baxay fade xad la xiriirta hub laga iibiyey dalalka Sacuud iga iyo Mareykanka, xilli uu diiday congress-ka Mareykanka, balse loo sameeyey qiil aan jirin.
Baaris uu wado dambi baar aha guud ee Wasaaradda Arr imaha Dibadda ee Marykanka oo ku saabsan haddii maa mul ka Trump uu si sharci darro ah ugu dhawaaqay xaalad "deg deg ah” si u hareer maro mamnuucistii Cong ress-ka ee in ah hub laga iibiyo Sacuudga iyo Imaaraadka ayaa waxa ay hadda iska cabin kala kulmeeysaa Aqalka Cad.
Isaga oo isku dayaya in baarista uu carqa ladeeyo, ayaa Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mike Pompeo axa uu diiday codsi wareysi ah oo uga yimid baareyaasha, waxaana taas bed delkeeda uu dalbaday inuu ka jawaabo su’aalo qoraal ah oo uga yimaada baareyaasha la sha qaynaya dambi baaraha guud Steve A Linick.
Linick waxaa eryay Madaxweyne Trump 7aa dkii lasoo dhaafay. Waxaa lagu eedeeyay inuu baarayo go’aankii Madaxweynaha ee ku dhaw aaqista xaalad deg deg ah oo la xiriirta amniga qaranka, si uu cudurdaar ugu sam ee yo in hub dhan $8.1 billion uu u dhoofiyo Sac uudi ga. Jariidadda New York Times ayaa waris ay in xilliga la eryay Linick iyo diidmada Pomp eo ee wareysiga ay muujinayaan in xoghayaha ar rimaha dibadda ka warqabay baaritaanka, isla markaana uu ogaa su’aalaha ku jira ee ku sa absan hubkii laga iibiyay dalalka Khaliijka.
Aqalka cad waxaa lagu eedeeyay inuu wax qarinayo. "Waxaa jiri kara in sabab kale loo ery ay Linick. Xafiiskiisu waxa uu codsigeyga ku baarayay ku dhawaaqistii xaaladda deg-degga ah ee Trump, si uu hub ugu diro Sacuudiga,” ayuu yiri Eliot Engel oo ah dimoqraadi ka tirsan Congress-ka.
"Sawir buuxa ilaa hadda kama hayno, waa wax xun in xoghaye Pompeo uu doonayay in Linick la eryo ka hor inta uusan shaqadiisa dhameysan.”
Kilaafka u dhaxeeya Congress-ka iyo Aq alka Cad waxaa uu soo billowday sanadkii la soo dhaafay. Sharci dejiyeyaashu waxa ay ka careysan yihiin dhimashada badan ee shacab ka ee ka dhalatay dagaalka cirka ah ee Sacuu digu uu ka wado Yemen iyo sidoo kale xad gudubyadda xuquuqda aadanaha ee oo ay ka mid tahay dilkii Jamal Khashoggi.
Congress-ku waxay ku guul dareysteen in ay hor istaagaan qalabkii militari ee sanadkii lasoo dhaafay laga iibiyay Sacuudiga iyo Imaa raadka, oo ah 2da dal ee dagaalka iyo xasuu qa ka wada Yemen.
Trump waxaa uu diiday inuu u hogaansa mo wicitaankooda waxaana uu iska indho tiray walaacooda. "Iibinta hubku waxaa ay taa geeri doontaa xulafadeena, waxayna horumar in do ontaa xasiloonida Bariga Dhexe. Wuxuu na dal alkas ka caawinayaa in ay iska difacaan Jam huuriyadda Iran,” ayuu yiri Pompeo.
Talaabada hubka looga iibiyay Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay cambareeyay 2da xisbi, xildhibaanadu waxay si cad u diideen sida qo rshaha loo sameeyay; waxay talaabadaasi wa ddada u xaartay in madaxweyneyaasha must aqbalku ay awoodooda ku xadgudban iyagoo baal maraya walaaca Congress-ka. Mr.Po mp eo ayaa hadda wajahaya baaritaanka imanaya congress-ka oo la xiriira arrin tan.
Iyadoo Habeen hore saq-dhexe ah dowladda Soom aaliya ay ku dhawaqday in Shalay ay tahay maalinta 1aad ee munaasab adda Ciidul-Fdir iga ayaa waxaa jira magaalooyin aan Shalay laga ciidin, islamarkaana la ga Sooman yahay.
Caasimada Online oo la xari irtay meelo badan ayaa oga atay in Shalay aan laga ciidey nin in ta badan gobollada dhexe, sida Dhuusam ar eeb, Guriceel, Caabudwaaq, Cadaado, Gaalk acyo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobol lada Galgaduud iyo Mudug.
Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in degmooyin ku yaalla gobolka Sh/ Dhexe aan laga ciideynin, sida Warsheekh, Cadale iyo de egaano hoostaga magaalooyinkaasi.
Waxaa sidoo kale jira in Muqdisho dadka qaar ay weli Sooman yihiin, islamarkaana ay dhameystirayaan 30-ka bisha ramadaan, inka stoo shacab fara badan oo ku sugan caasim ada ay Shalay si weyn u ciidayaan, kuwaas oo lagu arkayo meelaha dalxiiska.
Kala qeyb-sanaanta ciida ayaa timid, kadib markii Habeen hore fiidkii hore dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ay shaaciyeen in Shalay oo Sabti ah la dhameysti raan Soon, sida wadamo badan ay ku dhawa aqeen, balse DF ayaa Habeen hore xilli dambe sheegtay in Shalay ay tahay ciid, bishana laga arkayo meelo badan oo ka mid ah dalka.
R/Wasaaraha JFS oo ummadda Soomaaliye ed ugu hambalyeeyay munaa sabadda Ciidda ayaa dhaqaatii rta iyo howlwadeennada caaf imaadka uga mahad celiyayda daalkooda nafhurnimada leh ee safka hore ay uga galeen dagaalka loogu jiro ka hortag ga iyo xakameynta COVID19.
"Waxaan dhammaan Ummadda Soomaaliye ed meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyayn ayaa maalinta ciidda ah. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda uga mahad celiyo dadka Soomaaliyeed ee habeen iyo ma alin taagnaa sida dhibaatadu usoo billaabatay. Waxaa ugu horrreeya wasaaradda caafimaad ka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee u taagnaa inay dad Sooomaaliyeed badbaadiyaan, aan arkin qoysaskooda aan arkin caruurtooda, ee go’aansaday inay safka hore ka galaan dagaal lamid ah dagaalka xabbadda la’isu dhigo””, ayuu yiri R/wasaare Xasan Cali Khayre.
"Anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda, waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad um madda Soomaaliyeed usoo jiideen. Abaal ayaa ummadda Soomaaliyeed idiin heysaa horumar ayaad gaarteen inta idiin dhimanna waxaan le eyahay dhammeystira”, ayuu yiri R/Wasaaru hu.
R/W/ Khayre ayaa ummadda Soomaaliyeed xasuusiyay muhiimmadda ay munaasabaddani u leedahay kahor tagga Feyruska Karoona, wa xuuna uga baaqay inay feejignaan dheeri ah la yimaadaan ay ku dhaqmaan talooyinka caafim aad, qofkii awoodana uu gurigiisa ku ciideysto, si looga fogaado khatarta COVID19.
Madxweynaha Somaliland oo reer Somalil and iyo ummadda Islaamka ku hambalyeey ey munaasibadda ciida..”
Madaxweynaha Somaliland Md.Muuse Biixi Cabdi, waxa uu shacabka reer Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambaly eeyey munaasibadda ciidal-fidriga ee sanadka Hijriyada Islaamka ee 1441-naad.
Waxaanu Madaxweynuhu munaasibadda ciidul-fidr iga awgeed hambalyo u di rayaa dhammaanba umm adda Islaamka meel ay jog aanba,gaar ahaan ummadda reer Somaliland, wax aanu Ilaahay inooga baryayaa inuu inna ga aqb alo soonkii, ducadii iyo cibaadadii aynu bishan Ramadaan soo gu dannay muslim ah aan, Ilaah ayna inoo dambi-dhaafo, wixii dhib bana dhibta Alle ka dulqaado, xanuunkan adu unka sameey ey ee karoona-fayris-na innaga dulqaado cula yskiisa.
Sidoo kale waxa uu Madaxweynuhu, um madda reer Somaliland u rajeeyey inay sanad kan sanadkiisa ku gaadhaan barwaaqo, kana midho dhaliyaan hiigsigooda dhinaca horumar ka ee ay ku jireen, nimcadana khayrkeeda in na siiyo, nabad iyo caano, colaad la’aan, cay dhla’aan iyo cudur la’aana Ilaahay inaga ye elo, Ilaahay idankiina bishan bisheeda aynu ku gaadhno innaga oo halkan aynu jog no meel ka fiican joogna. Ugu danbaynna, madax we ynaha Jamhuuriy adda Somaliland, waxa uu dhambaal hamba lyo ah u dirayaa guud ahaan shucuubta Islaam ka ee ku dhaqan dunida dacaladeeda.
Tanzania oo qaab ka duwan dalalka kale ula tacaalaysa Fayraska Corona
Dalka Tanzania ayaa qaaday dhabo ka du wan tan uu caalamka intiisa kale kula tacaala yo Fayarska Korona ee safmarka ah.
Xilli ay dalalka ad duun ka xayiraado ku soo rogeen shacabk ooda,isla markaana la xaka meeyay socod ka, ay aa dalkaasi ku yaalla Bariga Afrika waxa uu go’aansaday inaanu tallaab ooyinkaasi raacin.
Inkastoo aanay jirin qaab si dhab ah loogu xakameyn karo faafidda cudurka, ayaa hadda na waxaa la is ku raacsan yahay in cabirka he erka uu gaarsiisan yah ay faafidda Fayr as ka ay muhiim u tahay la tacaalid diisa,Tan iyo 19-kii April, Tanzania ma aanay shaacin xogta kii saska cusub ee Fayraska Korona ee dalkeda.
Madaxweyne John Magufuli ayaa su’aal geliyay kalsoonida lagu qabi karo qalabka lagu baaro Fayraska, waxaana uu amray in la xiro sheybaarka qaranka, bil kadibna waxa uu sha aciyay in dalkiisa uu ka guuleystay cudurka saf marka ah. Lama oga in dib loo billaabay baarit aannada cudurka ee dalka Tanzania.
Safaaradaha ajnabiga ee waddankaasi ku sugan iyo dalalka jaarka ah ayaa walaac ka muujiyay go’aanka Tanzania.
Safaaradda Maraykanka ayaa ugu baaqd ay muwaadiniinteeda inay feejignaan badan muujiyaan, iyadoo sheegtay inay sareyso fursadda ah inay cudurka ka qaadaan maga alada Daa ru-salaam.
UK-na waxa ay muwaadiniinteeda kala baxd ay waddankaasi. Dalka deriska la ah ee Kenya ayaa dhawaan sheegay in 182 ajaanib ah oo ku sugnaan xuduudda ay labada dal wadaag aan laga helay cudurka, sidaana loogu diiday Inay soo gudbaan.Go’aankaasi ayaa ka caray siiyay xukuumadda Tanzania, waxaana ay ma s’uuliyiinta waddankaasi ku eedeeyeen Kenya inay boqnaha jarayso waaxdooda dalxiiska.
Zambia ayaa xiratay xuduudda ay la leedah ay Tanzania, kadib markii ay ogaatay in kiisas badan ay uga yimaadeen gediga kale.
Waxaan shaki ku jirin in tallaabooyinka ay qaaday Tanzania ee ku aaddan xanuunkan sa fmarka ah bilaha iyo sanadaha soo socda la ga baran doono casharro badan.
Karaash oo ka horyimid magacaabidii uu sameeyey Deni
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Ax med Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa ka soo ho rjeestay wasiirro iyo wasiir ku xigeennadii uu Habeen hore magacaabay Mada xweynaha maamulkaasi Siciid C/hi Deni.
Warqad uu soo saaray Karaash ayaa wuxuu ku sheegay inay sharci darro tahay magacaabistaasi, islamarkaana ay ka soo horjeedo dastuurka Puntland.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inaan lagala tashan xubnaha wasiirada cusub ee la magaca abay. Ugu dambeyn Axmed Karaash ayaa hoo sta ka xariiqay in xilligan ay Puntland ku jirto xaalado adag oo dhanka ammanka iyo caafi maadka ah, islamarkaana loo baahan yahay in wax ka qabashada arrimahaasi loo istaago.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo mu dooyinkii la soo dhaafay uu cirka isku sii share rayey khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha Puntland, Siciid Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash. Halkan hoose ka aqriso:-
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Degmada Diinsoor oo Qarax Miino lagu Dilay.
Warar aan dhawaab helnay ayaa sheegaya in Guddoomiyihii Ururka Haweenka D/Diinsoor ee G/Bay lagu dilay qarax dhawaan ka dhacay Degmadaasi. Qaraxaan ayaa ahaa miino noo ca dhulka lagu aaso ah ee laga hago meela fo g-fog ayaa waxaa uu ka dhacay Albaabka hore ee Guriga Guddoomiyaha Ururka Haweenka Diinsoor, waxaana lala eegtay xili ay ku sugn eyd Albaabka hore ee gurigeeda.
Baarliin Haaji Buille ayaa lagu magacaabi jir ay G/yihii Uururka Haweenka D/Diinsoor ee G/Bay, waxaana geerid eeda xaqiijiyay Saraak iil ka tirsan laamaha amniga degmadaasi. Dhanka kale qaraxaa ay aa waxaa ku dhaa wa cmay 3 Caruur ah oo la tilmaamay inay wax u aheyd Baarliin Xaaji, kuwaasi oo si Degdeg ah loogula cararay Xarun Caafimaad si looga daa weeyo waxyeelada kasoo gaartay qaraxa.
Braziil oo kaalinta 2aad kaga jirta dalalka uu si weyn u sameeyay Covid 19
Braziil ayaa diiwaangelisay koror kale oo we yn oo ah tirada dadka uu ku dhacay Cudurka Corona Virus , waxaa ay Shalay ka sara mar tay dalka Ruushka oo ku jiray kaalinta 2aad.
Madaxweynaha garabka midig ee reer Brazil Jair Bolsonaro wuxuu si isdaba joog ah u dhal leeceeyay talo bixinta caafimaadka bulsh ada, wuxuu dhaleeceeyay talaabooyinka xirida iyo hoos u dhigida halista Covid-19.
Sida laga soo xigtay tirokoobyada Jaamacad da Johns Hopkins, Mareykanka wuxuu diiwaa ngeliyay in kabadan 1.6 milyan oo xaaladood iyo ku dhawaad ​​96,000 oo dhimasho ah halka Russia ay xaqiijisay 326,488 cudur iyo 3,200 oo dhimasho ah.
Karaash oo ku baaqay Midnimo Xilli uu xog eystay Khilaafka kala dhaxeeya Deni
Madaxweyne Ku-Xigeenka D/Puntland Md .Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) ayaa farxa da munaasabada ciidul fitriga la wadaagay dha mmaan shacabka Soomaaliyeed gaar ah aan shacabka reer Puntland.
Wuxuu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku shacabka reer Puntland Eebe uga bary ay inuu cii dan ciideeda in agu gaadh siiyo dambi dhaaf, caafi maad qab, barwaaqo, am ni iyo horumar waara.
"Waxaa dhammaanteen eebe inooga baryayaa inuu ciidan ciideeda inagu gaadhsiiyo farxad, barwaaqo, amni iyo horumar”, ayuu yiri mada xweyne ku-xigeenku.
"Dhamaan Shacabka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa in lagu dadaalo Midnimada iyo Wadajirka,hana loo hogaansamo talooyinka Dhakhaatiirta Caafimaadka”
Musuqii ugu darnaa oo ka dhacay Baydh abo, xilli dadka Coronavirus ugu dhimanayan
Wararka ka imaanaya M/Baydhabo ee G/Ba ay ayaa sheegaya in si weyn uu ugu faafayo xanuunsidaha COVID-19, ee uu keeno Corona virus, iyadoo dhanka kalana ay isa soo tarayan dadka maalinta kasta xanuunkaasi ugu dhim anaya magaaladaasi.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in mag aalada laga dareemay saamaynta uu ku yee shagay xanuunka dilaa ga ah ee COVID-19, ka dib markii ay soo ko rdheen dadka lagu arkayo astaamaha lagu garto xanuunkaasi.
Saxafiyiinta M/Baydhabo ayaa soo warinaya in 3 meelood oo meel dadka Baydhabo ay isu arkayn calaamadaha lagu aqoonsado xanuun ka ugu nugul dunida ee la’is qaad-siiyo.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in ay kordheen meydadka lagu aaso xabaalaha ku yaala darafyada M/Baydhabo, iyadoona da dkaasi la rumeysan yihiin inay intooda badan u dhimanayan xanuunkan.
Ilo wareedyadan ayaa xaqiijinaya in dadka la ildaran xanuunka ay kaalmaati ahaan u qaat aan dawooyinka xanuun baabi’iyaasha iyo wel iba dawada xanuunka malaariyada, haddii la musuq maasuqay dawadii iyo agabkii caafima ad ee bulshadaasi loogu talagalay.
Waxaa xusid mudan in agabkii ay DFS u qo rsheysay in ay dadka reer K/Galbeed kaga ho rtaggaan xanuunka COVID-19 lagu iibiyo Suu qa M/Baydhabo, sida gacmo gashiga, afuufka afka iyo sanka lagu xirto.
Sidoo kale dawooyin kaalmaati ah oo ay DFS ku wareejisay Maamulka K/Galbeed, loo guna talagalay in dadka uu xanuunka soo rito lgula tacaalo ayaa si aan qarsoodi lahayn lo ogu iibiya rugaha caafimaadka ee Magaalada ku yaala, sida Farmashiyaasha. Dawooyinkan ayaa waxaa gargaar ahaan dalka u keenay Do wladaha Turkiga, Qatar iyo Hay’adda Caafim aadka Adduunka (WHO).
Mushkiladda ayaa waxay ka timid inaanan agabka iyo dawada kaalmaatiga ahba lagu war eejin W/Caafimaadka K/Galbeed, taasi bedelk eedana loo gacan-geliyay Mada xtooyada K/ Galbeed, waana mi da abuurtay in la musuqmasuqo
Markii ay dadka deegaanka arkayn sida aanu maamulku diy aarba ugu ah ayn wax ka qabashada COVID-19 ayay u jih eysteen inaa nay tagin goobta da dka looga ba aro xanuun ka, iyagoona door-bi day inay xanu unka qarsa daan, si iskooduna isugu karanti ilaan guryaho oda.
Waxaa intaasi dheer in lacagtii min halka mil yan ahayd, ee ay Xukuumadda R/Wasaare Khayre ugu deeqday Maamul Goboleedyada Dalka ka dhisan iyo kan G/Banaadir la musuq maasuqay qaybtii K/Galbeed, ee ahayd in lagu xakameeyo COVID-19.
Saamaynta Coronavirus kuma koobna shac abka Baydhabo oo qura, oo waxayba saama ynteedu gaartay Masuuliyiin Maamulka K/Galb eed qaarkood. Wasiirka Hawlaha Guud ee K/ Galbeed, Axmed Nuur Sheekh Maxamed (Ax med Mashruuc) ayaa iminka la ildaran xa nu unka. Wasiirka oo degan hoyga Isaaq Cali Su bag, Wasiirka Amniga K/Galbeed oo ku yaala xaa fadda Bardaale ayaa waxaa la soo she egaya in ay xaaladiisa liidato. Wasiir Mashruuc ayaan si caadi ah naqaska u qaadan karin.
Illaa iyo hadda waxaa xanuunka M/Baydha bo ugu dhintay 2ka mida Xildhibaanada Gola ha Wakiilada ee Baarlamaanka K/Galbeed. Xi ldhibaanadan ayaa lagu kala magacaabi jir ay Yuusuf Cabdinuur Suuri iyo Maxamed Axm ed Maxamed (Baafo).
K/Galbeed ayaa noqonaysa maamulkii ugu hor eeyay, lana soo wariyo in uu musuq maas uqay qoondadii ay DFS ugu talagashay in ma amulkaasi wax kaga qabto faafitaanka fayr iskan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Ma xamed Cabdi Waare oo ku sugan M/Be ledw eyne ayaa cafis u fidiyay maxaabiis ku jira xabsiyada Hirshabeelle.
Warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyna ha ayaa lagu sheegay in cafis loo fidi yay 10 maxbuus oo ku eedeeysan damb iyo fudud. Madaxweynaha ayaa sheegay in farxada ciida aawgeed uu cafiyay maxa abiistan.
Cafiska madaxweynaha ayaa kusoo aadaya xili xabsiyada Hirshabeelle aay bu ux-dhaafi yeen maxaabiis ku eedeeysan dambiyo kala duwan kuwaas oo qaarkood aaysan helin cad aalad.
Jan. Cali Gaab oo markale Muqdisho qarax lagula eegtay 7aad guduhiis
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax Miino oo Maanta M/Muqdisho lagula eegtay Gaari uu la socday Taliyaha Hog gaanka Caafimaadka ee Ciidanka Booliska So omaaliyeed Jan . Cali Barre Xersi (Cali Gaab).
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa Gaariga Taliyaha lala eegtay xilli uu marayay Waddada Afisiyooni gaar ahaan Ag agaarka Iskuulka Almasal,waxaana la sheegay in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhawac ah.
Wararla helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa uu ka badbaaday Taliye Cali Ga ab,hayeeshee ay ku dhaawacmeen 2ruux oo mid kamid ah haweeneey aheyd,kuwaas oo waddada marayay.
Waa markii 2aad oo muddo 7aad Gudihiis M/Muqdisho qarax lagula eegto Taliyaha hogg aanka Caafimaadka ee CBS Jan.Cali Gaab.
Meelo kamid ah Somalia & Caalamka oo Maalintii 1aad Ciidaya
Maanta oo Axad ah ayaa waxaa siweyn lo oga Ciidayaa dalal badan oo kamid ah Caalam ka oo ay ku jirto Soomaaliya,ka dib markii sha lay oo Sabti aheyd ay dhameystireen 30-ka Bisha Ramadaan.
Meelo kamid ah Soomaaliya ayaa shalay la ga Ciidayay halka dadka qaarkood ay soo manaayeen,waxaana Maanta laga ciidayaa qe ybo kamid ah Soomaaliya.
Deegaannada Maanta ay u tahay Maalinta 1aad ee Ciidul Fitriga ayaa waxa kamid ah Magaalooyinka,Dhuusamareeb, Guriceel, D/Warsheekh oo ka tirsan G/Sh/dhexe iyo qe ybo kamid ah Muqdisho,kuwaas oo saaka laga dareemayo Ciida.
Sidoo kale waxaa jira wadamo kamid ah ku wo Caalamka oo Maanta ay u tahay Maalinta 1aad ee Ciida,sida dalalka, Turkiga, Talyaani ga, Sacuudiga, Uganda iyo inta badan dalalka Reer Galbeed oo Muslimiinta ku nool ay shal ay Soomanaayeen.
Soomaaliya ayaa sanadkaan 2020 waxaa ay u aheyd sanad la isku khilaafay Maalinta 1a ad ee Ciidul Fitriga,ka dib markii W/Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya uu 2jeer marna sheegay in Sabtida Ciid aheyn halka Saqdii Dhexe ee habeenkaana uu sheegay in la Ciidayo.
Iyadoo dadka jahwareer gelisay in yar ay ciid een halka inta kalane maanta ciidayaan.
Sheekh Shaakir oo ku baaqay in loo Mido obo la-dagaalanka Al-Shabaab
Sh. Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaamiyeyaasha hoggaanka Ahlusunna ee dagaalka looga saaray deegaannada Galm udug ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Sh.Shaakir oo ku sugan M/Nayrobi ee dalka Kenya ayaa ugu baqay dadka ku nool deega annada Galmudug inay noqdaan kuwa ilaasha da